အမေရိကန်အနိုင်ကျင့်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောအမှန်တရား - Breeds
ရက်စက်သော? ရန်လို? ထပ်ပြီးစဉ်းစား။ The အမေရိကန်အနိုင်ကျင့် ခွေး grumpy ပေမယ့်ဘာမှဖြစ်ပါတယ်။
အထူးသဖြင့်ရပ်ကြီး ချစ်ခြင်းမေတ္တာ , ဒီခွေးသေမင်းသင်ခွဲခွာသည်အထိသင့်အနားမှာနေဖို့ပါလိမ့်မယ်။
သင်အမေရိကန်အနိုင်ကျင့်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သင်သိရန်လိုအပ်သမျှကိုပြောပြရန်ဤနေရာတွင်ကျွန်ုပ်ရောက်ရှိနေသောကြောင့်၎င်းသည်သင့်အတွက်သင့်လျော်သောမျိုးပွားဟုတ်မဟုတ်မဆုံးဖြတ်မီသင်ဤမတ်ေတာရှိသောခွေးနှင့်ပတ်သက်သောအမှန်တရားကိုသင်သိသည်။
တစ် ဦး Tank လိုတည်ဆောက်ခဲ့သည်
နိဂုံး - အမေရိကန်အနိုင်ကျင့်ခြင်းသည်သင့်အတွက်မျိုးစပ်ပါသလော။
ပထမဆုံးအမေရိကန်အနိုင်ကျင့်မှုကိုမွေးဖွားခဲ့သည် အမေရိကန် 1980 နှင့် 1990 အကြား။
သာမန်လွဲမှားသောအယူအဆမှာ Pit Bull နှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ ဒါ မမှန်ပါဘူး ။ American Bully တွင် Pit Bull မျိုးရိုးဗီဇမူရင်းရှိသော်လည်းအခြားခွေးမျိုးဆက်များမှာရောနှောခြင်းခံရပြီးအမေရိကန်အနိုင်ကျင့်ကိုကိုယ်ပိုင်ထူးခြားစေသည်။
ဒါဟာ Pit Bull ထံမှမျိုးရိုးဗီဇတွန်းအားပေးခဲ့ပါတယ် မတော်တဆထိခိုက်မှုမရှိဘူး တစ်ခုခုကိုဖြစ်စေ။ စိတ်အားထက်သန်မျိုးဆက်များတစ် ဦး နှင့်အတူခွေးရှာ၏ အားကစားတည်ဆောက် နှင့်က နိမ့်တိုက်ပွဲများ drive ကို။ ဤအ attribute တွေအတိအကျဘာကြောင့် American Bully သည်ယနေ့လူကြိုက်အများဆုံးမျိုးဆက်တစ်ခုအဖြစ်အလျင်အမြန်မြင့်တက်နေသည်။
အမေရိကန်အနိုင်ကျင့်ခြင်းကိုတရားဝင်အသိအမှတ်ပြုခဲ့သည် အမေရိကန်အနိုင်ကျင့် Kennel ကလပ် pedigree မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် breed စံကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခဲ့သည်ရှိရာ 2004 ခုနှစ်တွင်။ ဒါဟာအသိအမှတ်ပြုခံခဲ့ရသည် ယူနိုက်တက်ဂေဟာအိုးကလပ် 2013 ခုနှစ်တွင်။
ဒီဗီဒီယိုမှာ Pit Bull နဲ့ American Bully ကိုနှိုင်းယှဉ်နိုင်ပါတယ်။
American Bully ၏အင်္ဂါရပ်များမှာကူအစရှိသည့်အနိုင်ကျင့်စရိုက်များကိုနှစ်သက်သည် ရှေ့ကျယ်ပြန့်လေးလံသောအရိုးများ၊ နှင့်အတူ ကြီးမားသောမေးရိုး နှင့် ကြွက်သားခြေထောက်တိုတို။ အမြီးကရှည်တယ်၊
ဒီဖောက်ထဲဝင် အရွယ်အစား ၄ ခု ။ ဤတွင်သင်သိရန်လိုအပ်သောအရာကိုပါပဲ။
စံ: ဒါက ၂၀ အတွင်း (၅၁ စင်တီမီတာ) ကြွက်သားခန္ဓာကိုယ်နှင့်ပိတ်ဆို့ခြင်းခေါင်းနှင့်အတူအလတ်စားခွေး။
အိတ်ဆောင်: ဒီခွေးရောက်ရှိနေပြီ ၁၇ လက်မ (၄၃ စင်တီမီတာ) နှင့်သင်မှန်းဆနိုင်သည့်အတိုင်းသေးငယ်သည့်ခွေးတစ်ကောင်ဖြစ်သည်။
XL: ကောင်လေးတစ်ယောက်လိုဒီအမျိုးအစားကအမြင့်အထိရောက်နေတယ် ၂၀ လက်မ (၅၁ စင်တီမီတာ)
ဂန္ထဝင်: ဤ American Bully သည်စံအတိုင်းတိုင်းတာသည်၊ သို့သော်အခြားအမျိုးအစား ၃ ခုနှင့်ခွဲခြားထားခြင်းသည်၎င်း၏တည်ဆောက်မှုဖြစ်သည်။ ဂန္တ ၀ င်ကိုယ်ထည်သည်ခြေထောက်များနှင့်ကျဉ်းမြောင်းသောဘောင်များဖြင့်ကြီးမားသည်။ အဆိုပါဂန္မှဆိုပါတယ်ဖြစ်ပါတယ် Pit Bull နှင့်တူ၏ အခြားအမျိုးပေါင်းထက်ပို။
American Bully ကိုယ်အလေးချိန်သည်အမြင့်တစ်ခုစီနှင့်ကွဲပြားသည်။ တကယ်တော့၊ အမေရိကန်အနိုင်ကျင့်သူအားလုံးကိုအသက် ၁ နှစ်တိုင်အောင်စံသတ်မှတ်ချက်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည်။ ဒီအပေါက်ရဲ့ပျမ်းမျှအလေးချိန်ကနေအထိနိုင်ပါတယ် 66 to88 ပေါင် (30-40 ကီလိုဂရမ်) ။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်မတူကွဲပြားသောအမြင့် / အလေးချိန်စကေးရှိသောကြောင့်အမေရိကန်အနိုင်ကျင့်ခြင်းသည်ကောင်းမွန်သောအံကိုက်ဖြစ်စေသည် မည်သည့်အိမ်ကအခြေအနေ ၎င်းသည်မြို့ထဲရှိတိုက်ခန်းတစ်ခန်းသို့မဟုတ်ခြံဝင်းတစ်ခုရှိမရှိ။ သင့်တော်တဲ့အရွယ်အစားကိုရွေးပါ။
မျိုးဆက်များမှကြော်ငြာသော“ Pocket Bully”,“ Micro” သို့မဟုတ်“ XXL” မျိုးကွဲများကိုသင်တွေ့မြင်ပါကဤဝေါဟာရများကိုသတိပြုပါ။ ABKC ကအသိအမှတ်မပြု။
အကယ်၍ သင်သည်အမေရိကန်အနိုင်ကျင့် (small Bully) တစ်ခုရပြီးခွေးပြပွဲတစ်ခုကိုအလုပ်တစ်ခုအဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါကခွေးသေးငယ်လွန်းသည်ကိုမကြာခဏသတိရပါ အပြစ်ပေးသို့မဟုတ်ပင်အရည်အချင်းမပြည့်မှီ မျှော်လင့်ထားသည့်အမြင့်လိုအပ်ချက်များနှင့်မကိုက်ညီပါ။
အဆိုပါအနိမ့်ကို Maintenance အမေရိကန်အနိုင်ကျင့်
ဒီမျိုးစိတ်ရဲ့အကောင်းဆုံးသွင်ပြင်လက္ခဏာတွေထဲကတစ်ခုကတော့ဘယ်လောက်ထိပြုပြင်ထိန်းသိမ်းတယ်ဆိုတာပဲ။ အမေရိကန်အနိုင်ကျင့်အားကစားသည် ရေတိုချောမွေ့သောကုတ်အင်္ကျီ ဒါကလာနိုင်ပါတယ် မည်သည့်အရောင်ပုံစံ။
ဟုတ်တယ် hypoallergenic မဟုတ်ပါဘူး , ကုတ်အင်္ကျီဖြစ်ပါတယ် အနိမ့်သွန်းလောင်း။ သင်သည်သင်၏အနိုင်ကျင့်တိုက်မှသာလိုအပ်ပါလိမ့်မယ် တစ်ပတ်တစ်ကြိမ် အဘယ်သူမျှမအလှဆင်သူမလိုအပ်, ဒါကြောင့်သင်တို့၏အိတ်ကပ်ထဲမှာရှိနေသောအချို့အပိုပိုက်ဆံပဲ!
အချို့လူများကအကြောင်းပြချက်အချို့ကြောင့် American Bully ကိုသံသယဝင်ကြသည်။ ၎င်းကို Pit Bull မှပေါက်ဖွားခဲ့ခြင်း၊ ခြိမ်းခြောက်သောအသွင်အပြင်ရှိပြီးခွေးများကိုမကြာခဏအသုံးပြုလေ့ရှိသည်။
ငါဒီဖောက်ရဲ့ကိုက်အင်အား PSI များအတွက်အဓိပ္ပါယ်ခန့်မှန်းချက်ရှာမတွေ့နိုင်ပါ။ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကြည့်နိုင်ပါတယ် နွားထီးတကောင် နှင့် အမေရိကန်ခွေးဘီလူး ပိုကောင်းတဲ့နားလည်မှုရဖို့။
သင်္ချိုင်းတွင်းထဲသို့နွားလားရှိသည် 235 ၏ PSI ။ ၎င်းသည်အခြားခွေးအမျိုးအစားများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပျမ်းမျှအားဖြင့်ကိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ Pit Bull ကိုက်ရန်အလွန်ကြောက်နေသောခွေးတိုက်ခိုက်မှုများတွင်အန္တရာယ်များသည့်ဂုဏ်သတင်းနှင့်အမြစ်တွယ်မှုပိုများသည်။
အမေရိကန်ခွေးဘီလူးကိုက်သည် PS5 305 , သော Pit Bull ထက်လာကြတယ်ပိုထုပ်ပိုး။ ဤသည်ဖောက်နူးညံ့သိမ်မွေ့သောမိသားစုခွေးဖြစ်ခြင်းများအတွက်အမေရိကန်အနိုင်ကျင့်နှင့်အတူဂုဏ်သတင်းကိုမျှဝေ, ရန်လိုစဉ်းစားသည်မဟုတ်။
ဤရွေ့ကားနှစ် ဦး စလုံးအနိုင်ကျင့်မျိုးဆက်များဖြစ်ကြသည်, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့အမေရိကန်အနိုင်ကျင့်ကိုက်ကိုက်အင်အားတစ်နေရာရာမှာဖြစ်အံ့သောငှါစုဆောင်းနိုင်ပါတယ် 200 နှင့် 300 PSI အကွာအဝေး။
မည်သည့်ခွေးမျိုးကိုမဆိုကိုက်ခဲကိုက်နိုင်သည်၊ သို့သော်၎င်းပေါ်တွင်မူတည်သည် ပိုင်ရှင် ပြီးနောက် လူမှုရေးပမာဏ ခွေးက၎င်း၏အပြုအမူဆုံးဖြတ်သည်ကြောင်းလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်ဤသည်ကိုကြောက်ရန်အတွက်ကိုက်ခဲသည့်အင်အားတစ်ခုမဟုတ်ပါ။
သင်အဖော်ခွေးကိုရှာနေလျှင်၊ အမေရိကန်အနိုင်ကျင့်ခြင်းသည်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့, ဒီခွေးရာထူးများအတွက်အထူးရပ်ကြီးခဲ့သည်။
အဆိုပါဖောက်စံအရ, ဒီတစ် ဦး ဖြစ်ပါတယ် ယုံကြည်မှု နှင့် လူမှုရေး ခွေး ခန့်မှန်းရခက်သောသို့မဟုတ်အပြုသဘောဆောင်သောအပြုအမူနှင့် ပတ်သက်၍ သင်စိတ်ပူစရာမလိုတော့ပါ။
ဒီဖောက်ရဲ့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကိုဖော်ပြရန်အသုံးပြုသည်အခြားဝိသေသလက္ခဏာများအချို့ဘာတွေလဲ? သစ္စာစောင့်သိချစ်ခင် နှင့် နူးညံ့သိမ်မွေ့ စာရင်းထိပ်ဆုံး။
အမေရိကန်အနိုင်ကျင့် မြင့်မားသောအသိဉာဏ် ပြောင်းရွှေ့ခြင်းမပြုမီစောင့်ဆိုင်းခြင်းနှင့်စောင့်ကြည့်ခြင်း။ သူမနှစ်သက်ရာကိုနှစ်သက်တယ်၊ ဒါကြောင့်သူမမြန်မြန်ဆန်ဆန်သင်ယူပြီးမယိမ်းယိုင်တဲ့တုံ့ပြန်မှုကိုသင်မျှော်လင့်နိုင်သည် နာခံမှု။
ဒါက အလွန်လုံ့လရှိသူ သူမနေ့စဉ်ကယ်လိုရီလောင်ကျွမ်းမှုနှုန်းကိုသူမရရှိပါကသင့်ဖိနပ်သို့မဟုတ်ပရိဘောဂများပေါ်တွင်သူမယူသွားနိုင်သည်ကိုသတိရပါ။
အဆိုပါ Pit Bull ကို 'အဖြစ်ခေါ်ဆိုခဲ့သည် ထိန်းခွေး 'သမိုင်းတစ်လျှောက်လုံး, ဒါကြောင့်အမေရိကန်အနိုင်ကျင့်ကလေးငယ်များန်းကျင်သူတော်စင်ဖြစ်လူသိများသည်အံ့သြစရာမရှိပါ။
အဘယ်သူမျှမကျူးကျော်မရှိတိရစ္ဆာန်, အဘယ်သူမျှမထု! သင့်ရဲ့ခွေးသည်ဆိုပါက ကောင်းစွာ - လူမှုရေး သူမသည်ကလေးသူငယ်များစောင့်ရှောက်မှုကင်းမဲ့သောအပြုအမူကိုဆွဲဆောင်လိမ့်မည်။ Roughhousing ok, သူမတုံ့ပြန်လိမ့်မယ်။ အဲဒီအစား American Bully ကကလေးတွေကိုသူမကိုကျော်တက်ခွင့်ပေးမှာပါ။
မည်သည့်မျိုးပွားမျိုးကိုအသုံးပြုပါစေအကြံပေးလိုပါသည် ခွေးတစ်ကောင်ကိုဘယ်တော့မှမထားခဲ့ပါနှင့် ကလေးငယ်တစ်ယောက်နဲ့။
အမေရိကန်အနိုင်ကျင့်ခြင်းသည်လူမှုရေးခွေးဖြစ်သည်။ သူမသည်အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များအပါအ ၀ င်အခြားသူများနှင့် ပတ်သတ်၍ နေလိုသည်။ မည်သည့်မျိုးနွယ်နှင့်မဆိုကဲ့သို့ငယ်ရွယ်စဉ်ကမှလူမှုဆက်ဆံရေးသည်သူငယ်ဖြစ်ရန်သေချာစေရန်သော့ချက်ဖြစ်သည် အသစ်သောအခြေအနေများတွင်အဆင်ပြေ ။
ကျနော်တို့နည်းနည်းအကြာလူမှုဆက်ဆံရေးအကြောင်းပိုမိုပြောပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်ယေဘုယျအားဖြင့်, အမေရိကန်အနိုင်ကျင့်သင်၏အခြားအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များနှင့်သို့မဟုတ်ခွေးပန်းခြံမှာအိမ်မှာကြီးစွာသော PAL အဘို့စေသည်။
American Bully Aggressive လား။
ရဲ့ရပ်တန့်ခြင်းနှင့်ခွေးကျူးကျော်အကြောင်းကိုစကားပြောကြပါစို့။ အနိုင်ကျင့်ခြင်းမျိုး၊ အထူးသဖြင့် Pit Bull မြစ်များရှိသည့်ခွေးတစ်ကောင်နှင့်အတူ၊
ယုံမှားစရာမရှိ, ဤခွေးကြမ်းတမ်းခေတ်ရဲ့သွက်လက်နှင့်ကြွက်သားဖြစ်ကြသည်။ သူတို့သည်အားကစားတွင်ထူးကဲသောကြောင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုများကိုစိတ်ပျက်လက်ပျက်ဖြင့်ဖြေရှင်းနိုင်သည်။
အဆိုပါပြproblemနာ၌တည်ရှိသည် ခွေးရူး ။ အနိုင်ကျင့်ခြင်း (အထူးသဖြင့် Pit Bulls) သည်ဤကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသောသွေးအားကစားများတွင်များစွာအသုံးပြုသည်။ ခွေးများသည်ကျူးကျော်မှုအတွက်တိကျသောမွေးမြူခြင်းအားဖြင့်သဘာဝစရိုက်များကိုသစ္စာ ရှိ၍ နူးညံ့သိမ်မွေ့စွာဖြစ်စေသည်။
ဤခွေးဖြစ်ကြ၏ မဟုတ်ဘူး အဆိုပါဖောက်စံ။ ၎င်းတို့သည်လူသားများအလွဲသုံးစားပြုခြင်းကြောင့်အပြုအမူဆိုင်ရာပြissuesနာများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့်စိတ်ဒဏ်ရာရရှိစေသည်။
ဒါကြောင့်အခါသတိရဖြစ်ဖို့ကအရမ်းအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်ပါပဲ မျိုးဆက်ရွေးခြင်း၊ ချစ်ခြင်းမေတ္တာရှိတဲ့ဝန်းကျင်မှာနေထိုင်တဲ့ခွေးတစ်ကောင်ကို ၀ ယ်ယူဖို့သေချာပါတယ်။
ဒါဆိုအမေရိကန်အနိုင်ကျင့်မှုဆိုတာမဟုတ်ဘူး မဟုတ်မူလကပင်ရန်လို ။ ၎င်းအားလုံးသည်မျိုးရိုးဗီဇ၊ မွေးမြူခြင်းနှင့်လေ့ကျင့်ခြင်းပေါ်တွင်မူတည်သည်။
သင်ခွေးလေ့ကျင့်ရေးဆရာတစ် ဦး ပေါ်သို့ခုန်ထွက်ရန်ဆုံးဖြတ်သည်ဖြစ်စေ၊ ကိုယ်တိုင်လုပ်ပါ၊ လေ့ကျင့်ရေးကျိန်းသေအကြံပြုသည် အမေရိကန်အနိုင်ကျင့်သည်။
ပိုင်ရှင်အဖြစ်ကဖြစ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ် ယုံကြည်မှုစိတ်ရှည်ခြင်းနှင့်မြဲမြံ , စိတ်ပျက်ဖေါ်ပြခြင်းဘယ်တော့မှ။ ဒီအကူအညီကမသာ သူဌေးကခွေးသင်ပေး , ဒါပေမယ့်လေးစားမှုတစ်ခုပတ်ဝန်းကျင်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုမြှင့်တင်ရန်။
အမေရိကန်အနိုင်ကျင့်မှုအတွက်အကောင်းဆုံးလေ့ကျင့်မှုနည်းလမ်း ၃ ခု
American Bully ခွေးပေါက်စများသည်ဆီးအိမ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါ အသက် ၃ လ ။ သေတ္တာလေ့ကျင့်ရေး သင့်ကလေးကိုအိမ်ပြန်ရောက်သည်နှင့်ချက်ချင်းအကောင်အထည်ဖော်သင့်သည်။
သေတ္တာတစ်လုံးထဲတွင်အချိန်အနည်းငယ်သာသုံးခြင်းသည်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်တစ်ခုဖန်တီးရန်ကူညီသည်။ အဖြစ်ကောင်းစွာ, သဘာဝကျကျခွေး အပျက်မခံချင်ကြဘူး သူတို့အိပ်ရာ။
သင့်ခွေးသည်စိတ်အေးအေး ထား၍ လုံခြုံစိတ်ချရသောခံစားမှုရှိသောနေရာဖြစ်သည်။
နာခံမှုသည်ဤမျိုးရိုးကိုလူသိများသောစရိုက်ဖြစ်သည်။ အမေရိကန်အနိုင်ကျင့်တဲ့သူကလာတယ် အလုပ်လုပ်ခွေး နောက်ခံနှင့်လျင်မြန်စွာပညတ်တော်တို့ကိုလိုက်နာရန်သင်ယူပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ပြပွဲများတွင်ကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်များနှင့်အကြီးအလုပ်ဒါကြောင့်ပါပဲ အစောင့် / ဝန်ဆောင်မှုခွေး။
နာခံမှုကိုစောစောစီးစီးပြုစုခြင်းအားဖြင့်သင့်အားနားလည်သောယုံကြည်စိတ်ချရသော၊ ကောင်းမွန်စွာပြုမူထားသောခွေးနှင့်သင်ဆုချလိမ့်မည် သင်တာဝန်ခံတပါပဲ။
သင်ဟာပရော်ဖက်ရှင်နယ်သင်တန်းဆရာတစ်ယောက်ကိုငှားရမ်းနိုင်သည်၊ သို့သော်သင်ကိုယ်တိုင်လုပ်ခဲ့လျှင်အစီအစဉ်ကိုစွဲမြဲစွာထားပါ။ ဤသင်တန်းအမျိုးအစားတွင်ရှေ့နောက်ညီညွတ်မှုသည်အဓိကဖြစ်သည်။ သင်တို့သည်လည်းဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ် စိတ်အေးအေးထားပါ , အော်ဟစ်သို့မဟုတ်စိတ်ပျက်သို့ပေးခြင်းဘယ်တော့မှမ။
၎င်းသည်အမေရိကန်အနိုင်ကျင့်ခြင်းအတွက်လေ့ကျင့်သင်ကြားရန်အရေးကြီးဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ သူမသည်ကလေးများနှင့်အတူအံ့သြဖွယ်ကောင်းသော်လည်းဖြစ်နိုင်သည် အခြားခွေးနှင့်အတူ -offish ကောင်းစွာအစောပိုင်းအသက်အရွယ်ကနေလူမှုရေးမဟုတ်လျှင်။
စနေ၊ တနင်္ဂနွေများတွင်သူ့ကိုခွေးပန်းခြံထဲခေါ်ဆောင်။ အခြားခွေးများနှင့်မိတ်ဆက်ပေးနိူင်သည်။ သူမ၏ leash အပေါ်ထားပါနှင့်သူမ၏ဖြည်းဖြည်းတွေ့ဆုံရန် -and နှုတ်ဆက်ဘို့ furry မိတ်ဆွေများကိုချဉ်းကပ်ပါစေ။ မကြာခင်မှာပဲသူမအပြင်ထွက်ဖြစ်ခြင်းများအတွက်သူမ၏သဘာဝအလွှဲယူပါလိမ့်မယ်သူမလူတိုင်းနှင့်တွေ့ဆုံရန်သူမ၏အမြီးလှုပ်ပါလိမ့်မယ်။
ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သက်၍ အမေရိကန်အနိုင်ကျင့်ခြင်းသည်အတော်လေးကောင်းမွန်သည်။ ဒါဟာပျမ်းမျှသက်တမ်းရှိပါတယ် 8 မှ 12 နှစ်။
မည်သည့်ခွေးအမျိုးအစားနှင့်အတူရှိပါတယ် မျိုးရိုးဗီဇရောဂါများ ကြောင်းဘုံဖြစ်ကြပြီးမှတ်ရမည်ဖြစ်သည်။ American Bully မှာလည်းအလားတူပဲ။ ဒီရောဂါတွေကိုရှောင်ရှားဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကတော့မျိုးဆက်တစ်မျိုးရွေးချယ်တဲ့အခါသတိထားပါ။ ငါနောက်ပိုင်းမှာဒီအပေါ် hit ပါလိမ့်မယ်!
Hip Dysplasia: dysplasia တင်ပါးဆုံရိုး ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခွေးအသက်ကြီးတဲ့အထိရှာမတွေ့နိုင်လို့ပါ။ တင်ပါးဆုံရိုး၏ပုံမှန်မဟုတ်သောကြီးထွားမှုသည်နောက်ဆုံးတွင်ရွေ့လျားခြင်းသို့မဟုတ်ခြေဆွံ့ခြင်းများကိုဖြစ်ပေါ်စေသောနာကျင်သောပုံပျက်သောရောဂါများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
ချိုသောအာခေါင် / နှုတ်ခမ်း: မွေးဖွားစဉ်က၎င်းသည်ထိပ်နှုတ်ခမ်းနှင့်ပါးစပ်၏ပုံပျက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါဟာအသက်အန္တရာယ်မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမယ့်သက်သက်သာအလှကုန်။ လွယ်ကူသောခွဲစိတ်ကုသမှုတစ်ခုမှာဤအခြေအနေကိုပြုပြင်ရန်အတွက်ဖြစ်သည်။
Luxating patella: ၎င်းသည်ပုံမှန်မဟုတ်သောကြီးထွားမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးခွေး၏ kneecap ကိုရွှေ့ပြောင်းစေနိုင်သည်။
မွေးရာပါနှလုံးရောဂါ: ၎င်းသည်နှလုံးကြီးထွားရန်အန္တရာယ်ရှိသောအခြေအနေဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ခန္ဓာကိုယ်တစ်လျှောက်လုံးအရည်များထုတ်လွှတ်စေသည်။
Demodectic Mange: ဤသည်ကပ်ပါးပိုးသည်အရေပြားပေါ်တွင်ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းနှင့်အနာဖေးများဖြစ်ပေါ်စေသည်။
Ichthyosis: ၎င်းသည်အရေပြားပြissueနာဖြစ်ပြီးဖော pads များအထူနှင့်အခွံများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
Cerebellar abiotrophy: ကံကောင်းတာကဒီအခြေအနေကိုခွေးကလေးမွေးပြီးရက်အကြာမှာတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီမျိုးရိုးဗီဇရောဂါက ဦး နှောက်နဲ့အာရုံကြောစနစ်ကိုထိခိုက်တယ်။
တိုးတက်သောလွှာကျုံ့: ဒါ မျက်စိရောဂါ အမြင်အာရုံ၏တဖြည်းဖြည်းပြိုကွဲစေသည်။ ပျောက်ခဲသည်၊ မျက်စိကွယ်စေနိုင်သည်။
တိတ်တခိုး ဤသည်မှာခွေးတစ်ကောင်၏အမြင်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းပျောက်စေသည့်နောက်ထပ်မျက်စိရောဂါတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါဟာခွဲစိတ်မှုနှင့်အတူတညျ့နိုင်ပါတယ်။
အမေရိကန်အနိုင်ကျင့် chow အချိန်
သင်၏ American Bully ကိုကျွေးရန်အကြံပြုသည် တစ်နေ့လျှင်3ကြိမ်။
ဒီအသားကိုခံစားနေရတဲ့အတွက်အမေရိကန်အနိုင်ကျင့်ကိုအစာကျွေးခြင်းဟာအထူးထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လိုအပ်ပါတယ် အဝလွန်ခြင်း၊ အရေပြားဓာတ်မတည် , နှင့်ဓာတ်ငွေ့ ။ ကျန်းမာသောမျှတသောအစားအစာကိုစွဲကိုင်ခြင်းအားဖြင့်ဤပြtheseနာများကိုရှောင်ရှားနိုင်သည်။
သင်ရွေးနိုင်သည် ကုန်ကြမ်းအစားအစာများ, အော်ဂဲနစ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ သစ်သီးများ၊ အော်ဂဲနစ်အသားများ၊ ငါး၊ ဝက်သား၊ ကြက်ဆင်နှင့်ဥများပါ ၀ င်သည်။ ဤအစားအစာသည်အာဟာရနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်။ ရိုးရာခွေး kibble တွင်တွေ့ရသောကြာရှည်ခံ၊
အချို့သောအစားအစာများအတွက်အစားအစာအစာအာဟာရကိုထိန်းထားခြင်းသည်အချိန်ကုန်ပြီးဈေးကြီးနိုင်သည်။ အဲဒီအစား, အဘို့ကိုရွေးချယ်ပါ ပရီမီယံအဆင့်မြင့်ခွေးအစားအစာ သင်၏အမေရိကန်အနိုင်ကျင့်မှုအတွက်။ သေချာအောင်ထည့်ပါ ပရိုတိန်းနှင့်သိသိသာသာ carbs (ပြောင်းဖူးမဟုတ်) ။
သူမသည်တစ် ဦး လေ့ကျင့်ခန်းစွဲပါပဲ
The American Bully သည်အားလပ်ချိန်၌ကစားခြင်းကိုနှစ်သက်သည်။ သင်အနည်းဆုံးတစ် ဦး အဘို့သူမ၏လေ့ကျင့်ခန်းဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ် နေ့တိုင်းနာရီ၊ အခြားသူမအိမ်သူအိမ်သားန်းကျင်အဖျက်ဖြစ်ခြင်းအားဖြင့်လက်စားချေရလိမ့်မယ်။
သင်၏ American Bully ကိုဘယ်တော့မှပျင်းစရာမလိုအောင်ထိန်းထားရန်အကြံဥာဏ်များဒီမှာ။
လမ်းလျှောက်: ဒါကအမြဲတမ်းကောင်းတဲ့ရွေးချယ်မှုပါ။ သင်၏ခွေးကိုပန်းခြံတွင်ရှည်လျား။ သွက်လက်စွာလမ်းလျှောက်ခြင်းသို့မဟုတ်တောင်တက်လမ်းလျှောက်ခြင်းများကိုပင်လမ်းလျှောက်ပါ။
ရေကူး သင်တစ် ဦး ပူသောဒေသတွင်နေထိုင်လျှင်ဤသည်အထူးသဖြင့်ကြီးလှ၏။ ရေကူးခြင်းသည်ခွေးများနှင့်အဆစ်များပေါ်တွင်အလင်းရောင်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ဘောလုံးကိုရေကန်ထဲပစ်ထည့်လိုက်ပြီးသင်၏အမေရိကန်အနိုင်ကျင့်မှုသည်ခမ်းနားထည်ဝါလာသည်ကိုကြည့်ပါ။
သွက်လက်လေ့ကျင့်ရေး : ၎င်းသည်သင်၏ခွေးအားရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသာမကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုပါစိန်ခေါ်စေသည်သာမက သွက်လက်သောလေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းနှင့်သင်, သင်နာခံမှုကိုပိုမိုစူးရှရ။
စက်ဘီးစီးခြင်း: သင်၏ခွေးသည်သင်၏စက်ဘီးနှင့်အတူလှည့်ပတ်နေစဉ်ဖြည်းဖြည်းချင်းလမ်းလျှောက်ခြင်းဖြင့်စတင်လေ့ကျင့်ပါ။ မကြာခင်မှာပဲမင်းနှစ်ယောက်ဟာလမ်းတွေကိုဖြိုခွဲတော့မှာပါ။
ကစားစရာများနှင့်ပဟေlesိများ: သင်၏ American Bully သည်သင်၏ဖိနပ်မဟုတ်သောမိုးရာသီတွင်တစ်စုံတစ်ရာကိုကိုက်ခဲစေရန်ကြီးမားသောအလုပ်များသောဝါးကစားစရာများတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပါ။ ခွေးပဟေlesိသည် ဦး နှောက်ကိုလှုံ့ဆော်ပေးသည်။
ပထမ ဦး စွာလေးနက်သောမုန့်စိမ်းကိုဆေးကြောရန်ပြင်ဆင်ပါ။ အမေရိကန်အနိုင်ကျင့်စျေးနှုန်းအကွာအဝေးသည် $ 2000 နှင့် $ 5000 ။ ဒါကလူကြိုက်များတဲ့ခွေးပါ!
ခွေးမျိုးဆက်တစ်ခုကိုရှာခြင်းသည် Google search ကဲ့သို့လွယ်ကူသည်ဟုသင်ထင်ကောင်းထင်လိမ့်မည်။ တကယ်တော့မျိုးဆက်ရွေးတဲ့အခါရွေးဖို့အလံနီတွေအများကြီးရှိတယ်။
အနိုင်ရသူတစ် ဦး ဆင်းသက်ရန်ခွေးကလေးစက်များမှတစ်ဆင့်သင်၏လမ်းကိုမည်သို့ဖြတ်သန်းရမည်ကိုသင်ကိုယ်တိုင်သင်ကြားလိုလိမ့်မည်။
မျိုးဆက်တစ်ခုသို့လည်ပတ်ရန်ရက်ချိန်းယူပါ ။ ခွေးပေါက်တွေကစက်ရုံတွေလိုခွေးပေါက်စတွေကိုသူတို့ရဲ့စက်ရုံတွေကထွက်လာတဲ့လူမဆန်တဲ့အခြေအနေမျိုးကိုမမြင်စေချင်ဘူး။
ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာမျိုးဆက်တစ်ခုသည်သင့်အား tour ည့်သည်အားပြရန်ပျော်ရွှင်စွာဖြင့်သင့်အားလာလည်ရန်ဖိတ်ခေါ်လိမ့်မည်။ ခွေးပေါက်စများသည်အခြားသတ္တဝါများနှင့်လူများနှင့်ထိတွေ့မိလျှင်အပြင်တွင်ကစားခြင်းရှိမရှိသင်မိဘများနှင့်တွေ့ရလိမ့်မည်ကိုသင်ကြည့်ရပါလိမ့်မည်။
အနည်းငယ်ပိုကုန်ကျသောခွေးကလေးကိုသွားရှာပါ သငျသညျအရည်အသွေး, စင်ကြယ်သောသွေးကြောများနှင့်ကျန်းမာရေးအာမခံချက်များအတွက်ပေးဆောင်ပါတယ်။
ကျန်းမာရေးရှင်းလင်းရေးကိုတောင်းဆိုပါ ဂုဏ်သိက္ခာရှိသောမျိုးပွားသူသည်ခွေးပေါက်စများကို Vet ဖြင့်စစ်ဆေးပြီးမျိုးရိုးဗီဇရောဂါများဖြစ်သည့် hip dysplasia ကဲ့သို့သန့်ရှင်းလိမ့်မည်။
မိဘများနှင့်တွေ့ဆုံပြီးနှုတ်ဆက်ပါ ။ ၎င်းသည်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနောက်ခံနှင့်အခြားမျိုးရိုးဗီဇစရိုက်များအကြောင်းများစွာကိုသင့်အားပြောပြလိမ့်မည်။
ပထမ ဦး ဆုံးဖောက်သုတေသန။ American Bullies နှင့်ပတ်သက်လျှင်သိက္ခာမဲ့သောမျိုးပွားသူများသည်၎င်းတို့အားပိုမိုကြွက်သားများဖြစ်စေရန်ခွေးများကို steroids နှင့်အတူစုပ်ထုတ်ပေးလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်သူတို့၏ကျန်းမာရေးအတွက်အန္တရာယ်ရှိရုံသာမကခဏတာပြီးနောက်, သင်သဘောမတူသောခွေးသေးသေးလေးကိုဖော်ထုတ်ရန်စတီယာရင်များသည်ပင်ပန်းသည်။
စိတ်အားထက်သန်သောမျိုးပွားသူတစ် ဦး သည်သူတို့၏ခွေးပေါက်စများကိုချစ်မြတ်နိုးပြီး၎င်းတို့သည်တာ ၀ န်ရှိသည့်ပိုင်ရှင်ထံသွားလိုသည်။ သူတို့ကခွေးကလေးနဲ့အတူအိမ်ပြန်သွားတဲ့အခါပထမလအနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲအဆက်အသွယ်လုပ်ချင်ကြတယ်။
Razor'sEdge အနိုင်ကျင့် : GOES
မာရ်နတ်ရဲ့ Den အနိုင်ကျင့် : အသုံးပြုမှု
အသစ်ခွေးပေါက်စစျေးနှုန်းကိုသင့်လက်လှမ်းမမီနိုင်ပါ ပြဿနာမရှိပါဘူး! ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းတွေမှာလှပတဲ့အမေရိကန်အနိုင်ကျင့်မှုကိုသင်တွေ့နိုင်တယ်။
ဤခွေးများသည်သူတို့၏ထာဝရအိမ်သို့သွားပြီးသင့်အားချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြင့်ရေချိုးရန်စောင့်ဆိုင်းနေကြသည်။ ဒီမှာငါတို့ အမေရိကန်အနိုင်ကျင့်ကယ်ဆယ်ရေးနှင့်အမိုးအကာစာရင်း။ ၎င်းတို့တွင်အနိုင်ကျင့်မျိုးစုံရှိသည်။ သို့သော်သင်အမေရိကန်အနိုင်ကျင့်မှုကိုပြန်လည်စစ်ဆေးနိုင်သည်။
အံ့သြဖွယ်ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်းအနိုင်ကျင့်ခြင်းကယ်ဆယ်ရေး : FL
နယူးယောက်အနိုင်ကျင့်လေယာဉ်အမှုထမ်း : အသစ်
အနိုင်ကျင့်ကယ်ဆယ်ရေး၏တောင်ဘက် : SC
အနိုင်ကျင့်မျိုးဆက်များသည်တူညီသောအရာတစ်ခုတည်းကိုမျှဝေသည်။ ၎င်းတို့သည်ရှေးခေတ်မှဆင်းသက်လာခြင်းဖြစ်သည် သစ်ပင်ကြီး ကိုယ့်ကဲ့သို့ခွေး Canis Panther, ဒါမှမဟုတ် အမေရိကန် Bandogge ကွဲပြားခြားနားသော Molosser မျိုးကွဲများရောနှောသော။
မကြာခဏအဖြစ်ပုံဖော် ရန်လို ထိုမျိုးပွားများသည်အန္တရာယ်ရှိသောကြောင့်ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးဖြစ်သည်။ ဤဂုဏ်သတင်းကြောင့် Pit Bull ကဲ့သို့ခွေးများသည် ပိတ်ပင်ထားသည် အချို့ပြည်နယ်များတွင်။
အမှန်တရားကတော့အနိုင်ကျင့်တဲ့မျိုးရိုးတွေဟာရန်လိုမုန်းတီးမှုမဟုတ်ဘူး။ သူတို့သည်ကြွက်သားတည်ဆောက်ပုံနှင့်ခြိမ်းခြောက်နေပုံရသော်လည်းအမှန်တကယ်သူတို့သည်အသည်းခွေးများ၏အဖော်များဖြစ်သည်။ လူတို့အပြုအမူကိုဆုံးဖြတ်ရန်သူတို့၏ခွေးတစ်ကောင်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များကိုမည်သို့ပြုမူဆက်ဆံကြသည်။
American Bully ကမင်းအတွက်မဟုတ်ပါဘူး ဒါကအခြားအံ့သြဖွယ်အနိုင်ကျင့်ဝတ်ရည်များများရှိပါတယ် ok ပါပဲ။
အမေရိကန် Pit Bull Terrier
အမေရိကန် Staffordshire Terrier
သေးသေးလေး Bull Terrier
သင်တို့သည်လည်းထွက်စစ်ဆေးချင်ပေမည် သေးသေးလေးအင်္ဂလိပ်ခွေးဘီလူး ။
American Bullly vs. Pit Bull: ခြားနားချက်ကဘာလဲ။
ပထမတစ်ချက်မှာဒီမျိုးကွဲနှစ်ခုကဘာကိုထူးခြားစေတာလဲလို့သင်စဉ်းစားမိနိုင်တယ်။ အမှန်မှာ၊ အဓိကကွဲပြားခြားနားမှုများစွာရှိပါသည်။
အကြီးမားဆုံးခွဲခြားသတ်မှတ်ချက်မှာ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသွင်အပြင် ။ American Bully တွင်ခေါင်း၏ကြီးမားသောမျက်နှာရှိပြီး ပို၍ ကျဉ်းသောမျက်နှာနှင့်နှိုင်းယှဉ်သည် နွားထီးတကောင် ။
အမေရိကန်အနိုင်ကျင့် တိုတောင်းသည် အဓိကအားဖြင့်ခြေထောက်ကြောင့် Pit Bull ထက်ပိုသည်။ American Bully အမျိုးအစားအမျိုးအစားသာလျှင်ပျမ်းမျှအားဖြင့်ခြေထောက်များရှိသည်။
တည်ဆောက်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်လာသောအခါ Pit Bull သည်၎င်း၏ကြွက်သားများနှင့်ကြွက်သားများကြောင့်လူသိများသည်၊ သို့သော်ကြွက်သားသည်အမေရိကန်အနိုင်ကျင့်ခြင်း၏ပြသနာကြီးတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကြီးမားသောအရိုးများ၊ ကျယ်သောရင်ဘတ်နှင့်အထူကျယ်သောအင်္ဂါများက၎င်းအားကြံ့ခိုင်သောခွေးတစ်ကောင်ကိုပြုလုပ်သည်။
American Bully နှင့် American Bulldog သည်အတူတူလား။
အဖြေတိုတောင်းသည် မဟုတ်ဘူး သူတို့အတူတူဖောက်မရှိကြပေ။
The အမေရိကန်ခွေးဘီလူး အမေရိကန်အနိုင်ကျင့်ခြင်းထက်အများကြီးပိုရှည်သောယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာသင်္ကေတဖြစ်သည်။ ဒါဟာမူလကယခုမျိုးသုဉ်းကနေရပ်ကြီးခဲ့သည် အင်ျဂလိပျစာခွေးဘီလူး ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများကအမေရိကန်သို့ယူဆောင်လာခဲ့သည်။
အမေရိကန်ခွေးဘီလူးများအတွက်ကြီးပြင်းခဲ့သည် လယ်ယာအလုပ် ခွေးတွေနဲ့အားကစားတွေအပြင် American Bully မှာမူနွားမွေးမြူထားသော Pit Bull ၏အစကဖြစ်သည် ချစ်ခြင်းမေတ္တာ။
ခင်ဗျားကဒီမျိုးကွဲနှစ်ခုကိုသူတို့နဲ့ခွဲခြားလို့ရတယ် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသွင်အပြင် ။ American Bulldog သည်ပိုမိုရှည်လျားပြီးခြေထောက်ရှည်။ ပို၍ ပေါ့ပါးပြီးပိုမိုပေါ့ပါးသောခန္ဓာကိုယ်ပါရှိသည်။ ဦး ခေါင်းသည်အမေရိကန်အနိုင်ကျင့်ခြင်းထက် ပို၍ ကြာသည်။
အမေရိကန်အနိုင်ကျင့်သည်သားရဲကဲ့သို့တည်ဆောက်ခဲ့ပြီးကြွက်သားသည်ပြင်းထန်သည်။ ကျယ်ပြန့်သောဤကျယ်ပြန့်သောရင်ဘတ်နှင့်ကြီးမားသောမေးရိုးများကြောင့်မတွန့်ဆုတ်ပါနှင့်။ ဒီခွေးကိုပေးဖို့ချစ်ခြင်းမေတ္တာတစ်ခုလုံးအများကြီးရှိပါတယ်။
အနိုင်ကျင့်သူတွေက“ ထိန်းခွေးခွေး” တွေဖြစ်တယ်၊ ကလေးတွေကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆက်ဆံပါ
ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနိမ့်ကျခြင်း ( hypoallergenic မဟုတ်ပါဘူး )
ပွဲများ၊ ပြိုင်ပွဲများနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုခွေးများတွင်ထူးကဲသည်
သငျသညျအထူးသဖြင့်လေ့ကျင့်ရေးမှလုံလောက်သောအချိန်ကိုရည်စူးဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ် လူမှုရေး ။ ၎င်းသည်အခြားခွေးများနှင့်လူများအပေါ်ယုံကြည်မှုရှိစေရန်လိုအပ်သည်။
အဝလွန်ခြင်း၊ ဓာတ်ငွေ့နှင့်အရေပြားဓာတ်မတည့်ခြင်းများဖြစ်လေ့ရှိပြီးကျန်းမာခြင်း (တစ်ခါတစ်ရံတွင်ပိုမိုစျေးကြီးသည်) ။ အစားအစာ လိုအပ်တယ်
မြင့်မားသောစွမ်းအင်ကိုဆိုလိုသည် နေ့စဉ်လေ့ကျင့်ခန်း အဖျက်အပြုအမူကိုရှောင်ရှားရန်မဖြစ်မနေတစ်ခုဖြစ်သည်။
American Bully ကိုမင်းဘယ်လိုမြင်လဲ မှတ်ချက်များအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြပါ!